Soo dejisan MP4 Player 3.35.2 – Vessoft
WindowsMultimediaCiyaartoyda warbaahintaMP4 Player
Bogga rasmiga ah: MP4 Player
Player MP4 – software ah inuu u ciyaaro ee files multimedia in MP4, FLV iyo WebM qaabab. MP4 Player kuu ogolaanaya in aad u aragto video ku jira tayo sare leh, la abuuro Playlists iyo qiyaasteeda la bedelo ama hufnaan ah ciyaaryahanka. Software ayaa u saamaxaaya in ay tags bedesho oo soo ilaaleeya macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan files warbaahinta. MP4 Player sidoo kale taageertaa subtitles iyo waxa ku jira qalab badan oo ay ku Customize. Software waxay leedahay fudud ah si ay u isticmaalaan interface iyo gubtay, khayraadka nidaamka ugu yar.
Taageerada MP4, FLV iyo WebM qaabab
Work la Playlists
Isticmaalka Low khayraadka nidaamka
Soo dejisan MP4 Player
Faallo ku saabsan MP4 Player
MP4 Player Xirfadaha la xiriira